नेपाली सेनाद्धारा गोरखामा आगलागी नियन्त्रणको अभ्यास (फोटो फिचर) | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
नेपाली सेनाद्धारा गोरखामा आगलागी नियन्त्रणको अभ्यास (फोटो फिचर)
नेपाली सेनाको रणसिंह दल गण गोरखाले आगलागी नियन्त्रणको नमुना अभ्यास गरेको छ । आगो लागेका बेला कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारे घटना अभ्यास गरिएको रणसिंह दल गण गोरखाका गणपति उज्वल केसीले बताए । गोरखा सदरमुकामको रानिपोखरी ब्यारेक भित्र नमुना घटना अभ्यास गरिएको हो ।
घरमा आगो लाग्दा, विद्युत सट् भएर आगो लाग्दा र पेट्रोलियम पदार्थ वा रसायनिक पदार्थका कारण आगो लाग्दा कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सेनाले अभ्यासमा देखाएको थियो । जिल्ला सुरक्षा समितिका प्रमुखहरु, सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधि र द वल्ड क्यापिटल माविका विद्यार्थीहरु उक्त अभ्यासको अवलोकनमा सहभागी थिए ।
गाउँघरमा आगो लाग्दा छिमेकीले गर्नुपर्ने काम, सुरक्षाकर्मी, रेडक्रसकर्मी, संचारकर्मी, जनप्रतिनिधिको कर्तब्य र दायित्वको बारेमा समेत अभ्यास मार्फत जानकारी गराइएको थियो । कृत्रिम आगो लगाएर स्याउला, घरमा भएको पानी र दमकल सम्मको प्रयोग गरेर सेनाले आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
घाईते भएकालाई प्राथमिक उपचार, गम्भिर घाईतेलाई अस्पताल लैजानुपर्ने, आगो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने, रेडक्रसद्धारा राहत बितरण जस्ता काम नमुना अभ्यासमा देखाइएको थियो । बिपद्का बेला हरेक क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने र कसको जिम्मेवारी के रहने भन्ने घटना अभ्यासमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
उक्त अभ्यासमा गोरखा नगरपालिका र नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा गोरखाले सहयोग गरेको रणसिंह दल गण गोरखाले जनाएको छ । घटना अभ्यासले भईपरि आउने आगलागीका घटना नियन्त्रण गर्न सहज हुने अपेक्षा सेनाले गरेको छ ।